Washington: Waxaan rabnaa isbeddel ku yimaada habdhaqanka Dehraan – Radio Muqdisho
Washington: Waxaan rabnaa isbeddel ku yimaada habdhaqanka Dehraan
Maalin ka dib markii Washington ay cunaqabateyn cusub ku soo rogtay Dehran ayay Wasaaradda Arrimaha Dibedda Mareykanka cusboonaysiisay dalabkeedi ahaa in Iiraan ay bedesho dhaqankeeda iyo Siyaasadeeda ku wajahan Caalamka & gobolka.
Tani waxay timid kadib markii uu shir jaraa’id qabtay afhayeenka wasaarada arrimaha dibedda Mareykanka Heather Naort oo ku eedeeyay Dehraan Kordhinta qalalaasaha Bariga Dhexe iyo Caalamkaba.
lataliyaha amniga qaranka Mareykanka John Bolton ayaa sheegay in Iiraan ay ku howlantahay kordhinta gantaalaha nukliyeerka iyo sii hurinta colaada Bariga Dhexe.
“Iiraan lacagteeda kuma bixineysa adeeggyada bulshada, laakiin waxay awoodaa inay ku bixiso weerarrada argagixisada,” ayuu yiri afhayeenka wasaarada arrimaha dibadda Mareykanka, isaga oo intaa ku daray in dhankooda ay doonayaan in Iiraan ay la galaan heshiis ku saabsan Gantaalaha Ballistic ee Nukliyarka.
Habdhaqanka Xukuumadda Iiiraan ma ahan mid ka ka farxinaya Dadka reer Iiraan iyo guud ahaan Caalmka waayo lacaga badan ayay ku maal galisaa argagixisada Caalamiga ah ayuu markale yiri afhayeenka wasaarada arrimaha dibadda Mareykanka, isaga oo carabka ku adkeeyay in Washington ay daneyneyso wadahadal ay lagalaan Iiraan.
Sacuudiga iyo Iiraan oo ku hardamaya marin Biyoodka Baabul Mandab
Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka XFS Oo Sheegay In Horumarinta Waxbarashadu Ay ka Qayb Qaadanayso Wiiqidda Xag-jirnimada "SAWIRRO"